को होला आईपिएलको पहिलो फाइनलिष्ट ! - कान्तिखबर – सम्पुर्ण समाचार हामीसँग
१५ माघ २०७७, बिहीबार , ०१:०७
खेलकुद खबर राेचक लाेकप्रिय
को होला आईपिएलको पहिलो फाइनलिष्ट !
२०७७ कार्तिक २०, बिहीबार १७:०५ गते
काठमाडौं । दुबईमा जारी यसवर्षको इण्डियन प्रिमियर लिगमा आज फाइनलिष्टका लागि दुई टीम भिड्दैछन् ।
मुम्बई इण्डियन र दिल्ली क्यापिटलबीच हुने आजको खेलबाट फाइनलमा एउटा टीम पुग्नेछ । त्यसैले यो प्रतिष्पर्धा निकै रोचक मानिएको छ ।
यो सिजनमा दिल्लीको उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सफल भएको थियो ।
आइपिलको इतिहासमा चारपटक च्याम्पियन रहिसकेको मुम्बईलाई हराउन दिल्लीका लागि त्यति सजिलो भने छैन । तर मंगलबारका दिन सनराइजर्स हैदराबदसँग १० विकेटको हार बेहोरेको मुम्बईका लागि पनि दिल्लीसँग भिडनु कम्ति चुनौतीपूर्ण छैन ।
दिल्लीले लगातार चार खेलमा हारपछि रोयल च्यालेन्जर बैंगलोरलाई ६ विकेटले हराएर दोश्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएको थियो । यसबाट टीममा जीतको मनोबल उच्च रहेको छ ।
मुम्बईका लागि भने चार खेलमा अनुपस्थित रहेका कप्तान रोहित शर्मा खेलमा फर्किनुले ठूलो बल पुगेको छ । यद्यपी सनराजर्सविरुद्धको खेलमा भने उनी छिट्टै पभेलियन फर्किएका थिए ।
त्यसो त वर्तमान च्याम्पिन मुम्बईसँग सँग आक्रामक ब्याट्सम्यान रहेका छन् भने उत्कृष्ट बलर पनि उनीहरुसँग छन् ।
मुम्बईको शीर्षक्रमले राम्रो प्रदर्शन समेत गरेका छन् । युवा इशान किसनले ४२८ रन बनाउँदै आफूलाई उत्कृष्ट साबित गरेका छन् । यसपछि सूर्यकुमार यादवले ४१० रन, लामो शट खेल्ने हार्दिक पाण््ड्याले यो सिजनमा २४१ रन बनाएका छन् । योसँगै किरोन पोलार्ड र कु्रणाल पाण््ड्या पनि मुम्बईको जीतका लागि महत्वपूर्ण हुनेछन् ।
मुम्बईले आफ्ना दुई मुख्य बलर जसप्रीत बुमराह र ट्रेन्ट बोल्टलाई सनराजर्स विरुद्धको खेलमा विश्राम दिएका थिए । यी दुबैले शुरु र डेथ ओभरमा घातक बलिङ गर्ने गर्दछन् ।
उता दिल्लीका लागि अजिंक्य रहाणे आफ्नो फर्ममा देखिएका छन् । उनले आरसिबीविरुद्ध टण् रन बनाएका थिए । शिखर धवन त ५२५ रनसँगै फर्ममा नै छन् । दिल्लीको चिन्ता पृथ्वी शा र ऋषभ पन्तको हो । उनीहरु अहिलेसम्म फर्ममा देखिन सकेका छैनन् ।
यसैगरी विदेशी खेलाडी शिमरोन हेटमायर र माक्र्स स्टोइनिसको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुनेछ । कप्तान श्रेयस अय्यरले अहिलेसम्म ४२१ रन बनाएका छन् । उनको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुनेछ ।
यसअघि लीग चरणमा मुम्बईले दिल्लीलाई दुबै खेलमा हराएको थियो ।
एपीएफले पुलिसलाई दियो २०४ रनको लक्ष्य
२०७७ माघ १४, बुधबार १३:२३ गते कान्तिखबर
सन्दीपको मेलवर्नविरुद्ध खराब प्रदर्शन
२०७७ माघ १३, मंगलवार १४:०२ गते कान्तिखबर
खेलकुद खबर प्रदेश ५
माघ २२–२४ मा भलिबल प्रतियोगिता
२०७७ माघ १२, सोमबार १२:२४ गते कान्तिखबर